Ihe kpatara & otu esi enyere gi aka site n'inwe ahia ahia na mgbasa ozi na mgbasa ozi; Ihe Ntuziaka Site na Ọkụ
Ọ bụrụ na ịbawanye mma SEO, ọ bụghị ihe nzuzo na ọdịnaya bụ eze. Gịọdịnaya weebụ ga-abụ ihe dị mkpa, na-enye nkọwa ma na-arụ ọrụ maka engines ọchụchọ iji tụlee ịtụle saịtị gị. Kemgbe ọtụtụ afọ,Otú ọ dị, mgbasa ozi ọha mmadụ abanyewokwa na foto ahụ, a na-ejizi akara ya ugbu a iji nyere aka n'ịdị elu ogo ọchụchọ gị.O doro anya ịhụ SEO, ahịa ọdịnaya, na mgbasa ozi ọha na eze na-arụ ọrụ n'aka iji melite ọnọdụ ebe nrụọrụ weebụ gị dị.
Naanị ime ka nke a dokwuo anya, enwere ndụmọdụ 5 kachasị elu, nke Andrew Dyhan kọwara,Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara ,iji nyere aka mee ka SEO gị na ahia ahia na mgbasaozi mmadụ.
1 - buy real registered fake driver license. Ndekọ ọdịnaya Twitter
Ọ bụghị naanị ọdịnaya dị na weebụsaịtị gị nke na-enyere Google aka ịtọpụta saịtị gị.The more you tweet, and the more people share your tweets, mma gị ohere nke na-ebugo elu ndekota n'usoro. Ihe di omimi nkenetwọk ụwa pụtara na a na-eji usoro dịgasị iche iji chịkọta ihe ọmụma niile ma tinye n'ime usoro nke nwere ike ịnweta.Ndị crawlers Google bụ isi na-enyere aka na ntinye aha a, ha na-echebara ọdịnaya site na akaụntụ Twitter. Ya meremee ka ọtụtụ n'ime gị Twitter na tweet pụọ!
2. Zụlite usoro mgbasa ozi mgbasa ozi gị iji nweta ezigbo njikọta
N'ihi na engines ọchụchọ na-agbalị ime ka ndị mmadụ mara ihe dị mkpamgbe ha chọrọ ya, ha na-adabere na mgbasa ozi ọha na eze iji nyere aka. Nbudata njikọta na weebụsaịtị nwere, ka ọ na-egosi na ndị mmadụ na-ahụ saịtị ahụdị mkpa. O di nwute, ọtụtụ ndị na-emegbu ihe a n'oge gara aga ma na-etinye aka na usoro SEO iji nweta nkwalite saịtị ha.Nke a mere ka ndị engines na-achọgharị enyemaka maka enyemaka..Taa engines ọchụchọ na-ele anya na mmekọrịta mmadụ na ibe dị ka Facebook, Tweets,Google + 1 ga-ahụ otú saịtị gị si arụ ọrụ nke ọma, na otu esi etu ya n'usoro.
3. Jiri mgbasa ozi ọha na eze mee ka ị kwadoro
Taa, search engines adịghị na-ele anya na ọdịnaya na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ blog.Ha na-elekwa usoro ntanetị mgbasaozi gị. Kedu otu ndi mmadu si eji ọdịnaya gi, nakwa otu ndi mmadu na-ejikolaghachi gị. A na-eburu n'uche ọtụtụ ndị na-ege ntị na mmetụta ị nwere, ya mere na-etinye oge iji mepee nke gịdị ka na-eto eto na-ege gị ntị.
4. Tinye na Google kwa ụbọchị
Zụlite profaịlụ Google gị, bipụ ụbọchị ọ bụla ma Google ga-enwe obi ụtọ na gị.Jikọọ ndị mmadụ na biputere ọdịnaya dị na ya, kesaa profaịlụ gị, na-arụsi ọrụ ike na profaịlụ Google gị. Chọpụta ọdịnaya ị bụịkekọrịta na Google gị bụ ọdịnaya ịchọrọ ịdebanye aha maka.
5. Mee ka SEO egwuregwu gị dịkwuo ike
Mgbe ị na-ekwu okwu banyere SEO na ọdịnaya, ihe dịka isiokwu, nkọwa meta, altịdebe ihe oyiyi, na ọnụ ọgụgụ nke okwu na blog gị na-etinye ihe niile metụtara. Otú ọ dị, ihe agbanweela ntakịrị na oge. Nchọgharị ọchụchọ bụugbu a na-echegbu onwe gị banyere mkpa nke ọdịnaya gị. Ọ bụghị naanị maka ịṅụ nri nri, kama banyere otu ị nwere ike isi zaa yaajụjụ ndị mmadụ na-ajụ. SEO na-agbanwe ụdị ọdịdị dị na nsonaazụ gị. Ya mere jide n'aka na giọdịnaya dị ka ihe kwesịrị ekwesị ma na-arụ ọrụ dịka o kwere mee.
SEO, ahia ọdịnaya, na mgbasa ozi ọha na eze abụghị ihe jikọrọ ya. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, hana-aghọwanye nke jikọrọ ọnụ ka afọ na-agafe. Ha niile na-enyere aka rụọ ọrụ SEO na saịtị na ebe a ga-atụle yaọnụ na usoro ahia ahia weebụ.